Isihlahla se-Apple | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Isigaba Isihlahla se-Apple
Indlela yokufuthola isihlahla sama-apple kusuka ezinambuzane, izinyathelo zokulondoloza insimu
Ukuze uthole isivuno esihle sama-apula ngokuvamile kuvimbela izinambuzane zezihlahla ze-apula, eningi kakhulu. Ngakho-ke, bonke labo abakhula izihlahla ze-apula ensimini, kubalulekile ukwazi konke mayelana nokulawulwa kwezinambuzane zalesi sihlahla. Indlela yokuvikela i-apple esihlahleni sama-sawflies I-Apple izinambuzane nokulawula kunzima ngoba kunzima kumgadi oyinalwazi ongaqapheli ukubona inkathazo ethile ukuze ukhethe isilinganiso esiphumelelayo sokuqeda.
Indlela yokuvikela i- "Melbu" ezivela ezinambuzane nezifo
Izihlahla ze-Apple zingenye yezihlahla eziyinhloko emasimini. Kunezinhlobonhlobo eziningi zokuvuthwa okuhlukene nokunambitha. Noma kunjalo, konke kuyi-storehouse ebalulekile yamavithamini. Kodwa-ke, ukuze kutholakale isivuno esihle, umgadi wensimu kudingeka adondoloze izihlahla ezifweni nezilokazane. Izifo eziyinhloko zikaMelba kanye nokwelashwa kwazo uMelba yizinto ezihlukahlukene ezaziwa kahle ze-apula, ezidumile ngenxa yezithelo zayo ezimnandi kakhulu nezitshalo eziphakeme.
Incazelo, ukutshala nokunakekela i-apple ye-Gloucester
I-Apple Gloucester inhlobonhlobo yokuzalanisa isiJalimane, umphumela wokuwela izinhlobo ezahlukene ze-Glockenapfel noRichard Delishes. Lezi zihlukahlukene zavulwa ngo-1951 eJalimane. Izinzuzo zezinhlobonhlobo zingabhekwa ngokuphepha ngobuhle nokunambitheka, kanye nekhwalithi yokugcina izithelo. Lezi zinhlobonhlobo zinobunzima obusika obubusika, kodwa hhayi ngokwanele kweqhwa.
Okufanele ukwenze uma i-aphid ibonakala esihlahleni se-apula kunokuba uphathe isitshalo ngokumelene nenambuzane
Ama-aphid e-apula angabonakala ngamathuba aphezulu, ngakho wonke umuntu ofuna ukuvikela isivuno sakhe kubaluleke kakhulu ukwazi ukulwa nalo. I-Aphid iyinambuzane encane, ubukhulu bayo abudluli ku-4-7 mm, noma yiyona inkathazo eyingozi kakhulu yezitshalo nezithelo zezithelo. Izinkulungwane zezihlahla ze-apula zihlaselwa yizilokazane ngonyaka, ngokulahlekelwa kwezitshalo eziphawulekayo.
I-codling moth: izindlela, izindlela kanye namalungiselelo okulawula izinambuzane
Namuhla akekho ovikelwe kulesi nkathazo njenge-moth moth. Kuxhaphaza yonke indawo, kudla izivuno kokubili kokuthutha kwemboni, nasezindaweni zezwe. Ngezinye izikhathi ukulwa nalo kuphuze izinyanga ezinde noma ngisho neminyaka. Isitshalo esonakalisiwe, umzamo omkhulu, isikhathi nemali esetshenziselwa ukubhujiswa kwalesi sifo - akukho muntu ofuna ukuhamba nalokhu.
Indlela yokucubungula umuthi we-apula ngemuva kokusila, ukulawula izinambuzane
Ukuze kuvune izitshalo eziningi eziqinile futhi ezivuthiwe, kubalulekile ukuhlinzeka ngezivikelo ngesikhathi esifanele ezifweni nasezinambuzane. Akuyona into ehlukile kulokhu okuyizihlahla zezithelo ezitshalwe ensimini. Ngokuyinhloko, abalimi bavame ukuba nesithakazelo kulokho okumele bafake ama-apula ngaphambi nangemva kokuzimbali.
Ukulima kwe-agrotehnika ye-apula "Ukugcwaliswa okumhlophe"
Izithelo "Ukugcwalisa Okumhlophe" kuqala ukuvuthwa kuzo zonke izinhlobo ze-apula. Zine ukunambitheka okuthakazelisayo futhi zikulungele ukugaxeka, ukugaxeka nokunye ukudla okusemakhayeni asekhaya. Izinhlobo ezinjalo zitholakala cishe kuzo zonke izindlu, kulula ukugcina futhi zingenzi izinkinga ezingadingekile. Uma sihlinzeka ngemithi encane ye-Apple ethi "Ukuthumba White" ngokudla nokuphuza ngesikhathi esifanele, ukusika izikhono, isihlahla sizokubonga ngokuvuna kakhulu ngonyaka wesithathu emva kokutshala.
Kolonovidnye apula: ukutshala, ukunakekela, ukusika
Inkinga yaphakade yezakhamuzi zasehlobo ukungabi nesikhala. Ngifuna ukutshala okuningi, kodwa isayithi inezimingcele, udinga ukuhlela ngokucophelela ukusatshalaliswa kwendawo. Uma kungenzeka ukuqhuba ukuhlolwa engadini okungenani njalo ngonyaka, le nombolo ngeke isebenze nensimu. Umuthi ngamunye udinga isikhala esanele se-root system kanye nomqhele.
Indlela yokutshala nokukhula izinhlobo ze-apula "Medunitsa" endaweni yakubo
Isihlahla se-Apple "i-Medunitsa" - izinhlobo ezihlukahlukene kunazo zonke zezihlahla ze-apula zasehlobo, ezibonakala ngobunzima bebusika nezici ezinhle kakhulu zezithelo. Umlando wezinhlobo zama-apula wokulima "iMedunitsa" izinhlobo ze-Apple "i-Medunitsa" yavuthwa eminyakeni engaphezu kwengu-50 edlule. Usosayensi uS I. Isaev wadabula izinhlobo ezimbili: iCinnamon Striped ne Welsey. Lezi zinhlobonhlobo kubhekwa ukuphumelela okukhulu ngoba ayinamathele esikhaleni.
Indlela yokutshala izihlahla ze-apula "iSinap Orlovsky" ensimini yakhe
I-Sinap Orlovsky i-apula tree ehlukahlukene iyabaluleka kakhulu ngabalimi hhayi kuphela ukunambitheka kwayo okuhle, isethulo sesithelo, isikhathi eside sokuphila kwayo, kodwa nobuhle bezihlahla zezimbali. Umlando wokukhethwa kwezinhlobonhlobo ze-apula "Isi-Sinap Orlovsky" I-apula ye-apula "iSinap Orlovsky" yavulwa ngo-1955 yi-All-Russian Research Institute yezolimo ezizala izithelo.
Ukulima kwesihlahla se-apula "iNyakatho Synapse": izinzuzo nezinkinga ezihlukahlukene, ukutshala nokunakekelwa
Ama-apula asekupheleni-ebusika wezinhlobonhlobo ze "Northern Synapse" awayena ophansi kunambitheka ezinhlobonhlobo zezintandokazi ze-aristocracy yeNyakatho Yezwe Elisha. Kodwa-ke, ukuvela kwaleli qembu kubangelwa isifiso sokuthuthukisa izithelo ezikhona ezikhona, ezihloselwe izikhulu. Izinhlobonhlobo zinokuphikisana kakhulu neqhwa, okubaluleke kakhulu ezindaweni lapho izimo zezulu zinciphisa isikhathi sokukhula kwezitshalo.
Indlela yokutshala izihlahla ze-apula Zhigulevskoe engadini yami
Ukufunwa kwama-apula kubonakala nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Kodwa ikakhulukazi ebusika nasekuseni kwentwasahlobo, sifuna ama-apula ashisayo namnandi. Izinhlobo ze-apple zasehlobo sezidliwe kakade. Ungakhetha ama-apula angenisiwe, kodwa ayabiza futhi ngokuvamile ayinambitheki. Ngakho-ke, uthando olukhethekile lwabalimi olufanelwe nge-autumn izinhlobo, ezivuthwa kamuva futhi zigcinwe kahle.
Ukutshala izihlahla ze-apula "Sun": amathiphu okutshala nokunakekelwa
Ama-apula asekwindla yamuva ehlobo lwe "Sun" ayethandwa abalimi basekhaya ngenxa yokunambitheka kwabo okusezingeni kanye nekhwalithi yokugcina okuhle. Ukukhuphula, amaqoqo abo abomvu ahlobisa umqhele omncane womuthi omncane. Ngaphezu kwalokho, lezi zihlukahlukene zihlukaniswa nokulula kokulima kwezolimo. Kulesi sihloko sizochaza indlela yokukhulisa i-apula "Sun" kusayithi lakho, kanye nokuhlaziya izinzuzo eziyinhloko nezimo eziyingozi ezihlukahlukene.
Izinhlobonhlobo ze-apple ikholomu "Imali", ukutshala nokunakekela isihlahla engadini
Ukuvela kwezihlahla ze-apulale ezikhohlakeleyo kuxazululwe inkinga yokungabi nesikhala ezindaweni ezincane ezizimele, okuvumela abathanda ukulima futhi balimi ukuze basebenzise kahle indawo futhi baqoqe izivuno ezinhle. Cabangela izici zenye yezinhlobonhlobo ezinhle zasebusika futhi uhlaziye ubuqili bokulima.
Incazelo, ukutshala nokunakekelwa kwe-sinamoni i-apple emigqabha
Izinhlobonhlobo ziyaziwa ngezolimo zasemakhaya iminyaka engaphezu kwekhulu. Esikhathini esidlule, wayekhona ngempela ensimini yonke, futhi namuhla ukhohliwe kancane ngenxa yobuningi bezinye izinhlobo zezihlahla ze-apula. Nokho, labo abahlala bethembekile kuye, bathola isivuno sama-apula amahle nge ukunambitheka okuhle kakhulu. Incazelo ye-apple tree cultivar "I-Cinnamon Striped" Ukuze uqonde izinzuzo zomuthi wensimu, kufanele ufunde ngokucophelela incazelo ye-cultivar "I-Cinnamon Striped".
Izimfihlo zokulima ngokuphumelelayo kwezihlahla zama-apula "Ubuhle Bashkir"
Ukukhetha uhlobo oluthile lwe-apula lokukhula engadini yami, ngifuna ukuthi kube nokubukeka okunethezeka, izithelo ezihlwabusayo futhi, kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu siphila, njalo siletha ukuvuna okuqhubekayo. Umuthi we-apula "Ubuhle Bashkir" buzibonakalise kuzo zonke lezi zimfanelo - uzothola incazelo yezihlukahlukene ngezithombe, kanye nezici zokutshala nokulima kulokhu kulesi sihloko.
Izimfihlo zokulima ngokuphumelelayo kwe-apula "Champion"
I-Apple iqhawe izinhlobonhlobo ngenxa yomkhiqizo wayo kanye nezici zokunambitha zanqoba udumo ngempela phakathi kwabalimi baseYurophu. Lezi zinhlobonhlobo zicatshangelwa yiziningi ukuba zibe yindlela enhle yokukhiqiza kwezohwebo. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa ngempumelelo kakhulu ukujula kwezimo zokulima kanye nezivuno eziphezulu.
Izimpawu kanye nezici ezikhethekile zokutshala izinhlobo ezihlukahlukene ze-Apple "cultivar"
Izihlahla ezijwayelekile ziyithola ngempela abanikazi bezitidi ezincane, lapho kungekho khona isikhala esanele. I-Kolonovidnye izinhlobo zezithelo zezitshalo zingasebenzisa ngempumelelo indawo, okokuqala zingakhula ngezimbiza eziningi futhi ngesikhathi esifanayo ziveza izithelo. Enye yezinhlobo zasebusika ezithembisayo zezihlahla ze-apula ezinemiqhele emihle yiyona "uMengameli", izithelo ezingenayo kuphela ngobuningi, kodwa ngesayizi.
Indlela yokubhekana ne-scab nge-apula
Isikhumba yisifo esivamile esingathinta izihlahla ze-apula. Kunzima kakhulu umuntu ohlala ehlobo ukubhekana nalesi sifo, kodwa kungenzeka. Kulesi sihloko sizohlinzeka ngezeluleko eziwusizo kanye nezeluleko ezisebenzayo ezivela kubalimi abanolwazi abazokwazi ukunikeza ulwazi mayelana nendlela yokuqeda ukhonyovu ngama-apula.
Indlela yokubhekana ne-powdery isikhutha ku-apula
Njengoba kuvela i-mycelium, okwenza ukuba kuthuthukiswe isikhutha se-powdery, izihlahla zibuthakathaka, zilahlekelwe amahlamvu awo kanye ne-ovary, isivuno sawo sinciphisa, futhi lapho kwenzeka amacala amakhulu, ngisho nezinhlobo ze-frost ezingapheli ziyafa ngesikhathi sasebusika. Ake sihlole izinsongo eziseduze ukuthi isikhumba se-powdery sihlanganisa, izibonakaliso zayo zokuqala ku-apula futhi sikutshele indlela yokubhekana nayo.